Zimbabwe Police Ignore Court Order To Hospitalize Abducted Activists
The Zimbabwean police as of Thursday had failed to comply an order issued by the country's high court instructing them to hospitalize human rights monitor Jestina Mukoko and members of the political opposition who resurfaced weeks after being abducted by security agents, only to be arraigned this week on charges they plotted to overthrow the government.
High Court Justice Yunus Omarjee on Wednesday ordered Mukoko and eight activists of the Movement for Democratic Change to be released for care in hospital under police guard. But on Thursday the detainees remained at the Chikurubi maximum security prison.
Lawyer Alec Muchadehama, representing the activists told reporter Jonga Kandemiiri of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that attorneys are making the rounds of police stations with the court order in hand urging the officers in charge to comply with the order.
Though Mukoko is still detained, family members said they were still feeling great relief that she is alive, as many feared she had been killed following her Dec. 3 abduction.
Reporter Kandemiiri interviewed Cosmas Mukoko, her brother.
Interview With Cosmas Mukoko